Wasaaradda Qorsheynta XFS oo kulan wadatashi ah la qaatay xubnaha Laanta Fulinta ee Degmada C/waaq. | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
C/waaq.(SONNA)…Kulan wadatahsi ah oo ay ka qeybgaleen madaxa maamulka Degmada, Ciidamada Nabad galyada, aqoonyahanka,isla markaana looga hadlaayey la socodka adeegyada lagama maarmaanka u ah bulshada ku dhaqan degmada Caabud-waaq,ayaa lagu qabtay degmadaasi oo ka tirsan gobolka Mudug.
Kulankan oo ah wareegga labaad ee Qorshaha Sagaalaad ee Horumarinta Qaranka waxaa lagu dhageystay baahiyaha muhiimka ah iyadoo lagu soo bandhigay liiska u baahan wax ka qabashada ee la doonayo in lagu jaan-gooyo ahmiyadda saddexda ah ee Qorshaha Qaranka iyo tiirarka dhaxtaalka ah ee la doonayo in dalka himiladiisa looga run sheego 5-ta sano ee soo socota.
Waxaa heer gaba gaba ah marayo geedi socodka Qorshaha Horuamrinta Qaranka oo dhammaan laga wada talagaliyay guud ahaam umadda Soomaaliyeed ee ku nool gudaha daka, taas oo ka dhign in qaran jabkii ka dib qofka Soomaaliyeed go’aamiyo masiirka dalka lagu dhisanaayo.
Previous articleWasiirka Waxbarashadda XFS oo Dalka Cumaan uga qeyb galay Kulan la xiriiray Horumarinta waxbarashada.
Next articleShir ku saabsan dib u eegista Dastuurka oo lagu soo gaba-gabeeyey Muqdisho